देउवाले त्यसै पेलेका होइन रहेछन् शेखरलाई ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
देउवाले त्यसै पेलेका होइन रहेछन् शेखरलाई !
बैशाख २५, २०७९ आईतबार
काठमाडौं । देश चुनावमय बनेको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेताहरू देश दौडाहमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले सत्ताको बागडोर सम्हाली रहेका छन् । ती पाँच दल गठबन्धनकै रूपमा संयुक्त चुनावी सभा गरिरहेका छन् । उता एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पनि कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
यस्तो बेला सबै नेताहरू आफ्ना दलका प्रतिनिधिलाई जिताउनका लागि देश दौडाहामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै देशका विभिन्न भूभागमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । भरतपुर, काठमाडौं, बुटवल, जनकपुर र पोखराको चुनावी सभालाई देउवाले सम्बोधन गरिसकेका छन् ।
अहिले कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । उसकै नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सिंगो पार्टीपङ्ति नै लाग्नु पर्ने हो । यो पार्टीको आन्तरिक विषय नभएर अन्य दलसँगको प्रतिस्पर्धा हो । स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि मत माग्ने समय घर्किँदै गर्दा कतिपय नेताहरूले भने आफ्नो सक्रियता बढाएको पाइँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनले १४औँ महाधिवेशनमा पनि सभापतिको आकांक्षा राखेका थिए । उनी आफ्नो गुटबाट निर्विरोध सभापतिको उम्मेदवार बनेर देउवासँग चुनाव लड्न चाहन्थे । तर, पौडेललाई उनकै गुटका शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतले साथ दिएनन् । र, आँसु झार्दै पौडेलले प्रतिस्पर्धाको मैदान छोडेका थिए ।
उतिबेला चित्त दुखाए पनि पौडेल यतिबेला भने स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताका लागि भोट माग्न व्यस्त छन् । गाउँ–गाउँ पुगेर कांग्रेसका पक्षमा मत मागिरहेका छन् । तर, सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका कोइराला भने चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिँदैनन् ।
सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि देउवाले कोइरालालाई वरीयतामा निकै तल राखेका थिए । त्यसबेला देउवाको विरोध पनि भएको थियो । सभापतिमा पराजित भएको व्यक्तिलाई वरीयतामा निकै तल राखिएको भन्दै शेखरप्रति सहानुभूति पनि प्रकट भएकाे थियाे । तर, यतिबेला कोइराला स्थानीय तह चुनावमा सक्रिय नभएको देख्दा देउवाले उनको चरित्र बुझेकै कारण त्यस्तो गरेको चर्चा कांग्रेसीहरूबीच हुन थालेकाे छ ।
देशभर कांग्रेस बलियो भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सबै शीर्ष नेतालाई नै पुग्ने हो । शेखरलाई अर्को पटक सभापतिको बलियो आकांक्षीको रूपमा लिइएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले सक्रिय सहभागिता देखाएको भए त्यसको जस पनि उनैले पाउने थिए । तर, उनले पार्टी सभापतिलाई विभिन्न दोष देखाउँदै चुनावी अभियान नै ‘बहिष्कार’ गरेका छन् । कुनै व्यक्तिलाई दोष देखाउनुभन्दा पनि पार्टीलाई जिताउने प्रमुख विषय भएकाले शेखरले चुनावी अभियानमा तीव्रता दिएको भए राम्रो हुने बहस हुन थालेको हाे ।
‘राजनीति देश र जनताका लागि गरिने हो । जो व्यक्ति जनतामाझ बढी जान्छ, जनतामा घुलमिल बढी हुन्छ, उसको लोकप्रियता त्यत्ति नै बढ्ने हो’, कांग्रेसका एक क्रियाशील सदस्यले भने, ‘मेराे नाम चाहिँ नलेखिदिनुहाेला ।’ अहिले शेखरसहित विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालालगायत पार्टीका केही नेताहरूको सक्रियता नदेखिएको उनले दुखेसो पोखे ।
हुन त पाँचदलीय गठबन्धनमा चुनावी भागबण्डा मिलाउन निकै सकस परेको थियो । तालमेलप्रति गठबन्धनका अरु दलका नेताले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले भने गठबन्धनलाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले मात्रै अघि बढाएनन्, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका थिए ।
६ मध्ये कांग्रेसले मेयरका उम्मेदवार पाएको तीन महानगरमा देउवाले पार्टीकाे शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै समीकरण मिलाएको पाइन्छ । उनले काठमाडौंमा प्रकाशमान सिंह समूह, विराटनगरमा कोइराला समूह र ललितपुरमा संस्थापन समूहका उम्मेदवारलाई मेयरका रूपमा खडा गरेका छन् । यतिमात्र होइन, विगतदेखि नै कोइराला समूहको प्रभुत्व रहेको विराटनगरमा देउवा आफैँ पुगेर शेखर समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन अग्रसर भए । तर, शेखरले भने कुनै पनि सभामा सहभागीता जनाएनन् । ‘यसबाट पनि उनको साँघुरो मानसिकता प्रष्ट भएको छ’, ती क्रियाशील सदस्यले भने ।
कोइराला सुरुदेखि नै कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताउँदै आएका नेता हुन् । तर, देउवाले ओलीले पटक–पटक संसदमाथि आक्रमण गरेको समयमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धनले कांग्रेसलाई साथ दिएकाले स्थानीय तह चुनावमा पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नु पर्ने अडान कसेका थिए । देउवाले कम्यिनष्टहरूकाे एकता राेक्न पनि गठबन्धनका नाममा चतुर्‍याइँ गरेकाे कतिपयकाे टिप्पणी छ । ‘राजनीतिकाे अंकगणितका चतुर खेलाडी देउवाले प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई अघि बढाएर एमालेलाई ‘साइजमा’ राख्ने अभियानकाे नेतृत्व गर्नुभएकाे छ । तर शेखरसहितका नेताहरू याे कुरा बुझेर पनि नबुझेझैँ गरिरहनुभएकाे छु’, ती क्रियाशील सदस्यले थपे ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २५, २०७९ आईतबार ३ : ५९ बजे